Guddoomiyaha IEBC oo sheegay in si sharci darro ah qandaraasyo loo bixiyay – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyaha IEBC oo sheegay in si sharci darro ah qandaraasyo loo bixiyay
Star FM November 27, 2018
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC Mr. Wafula Chebukati ayaa sheegay in saraakiisha sar sare aysan waxba ka ogaan qandaraasyo la bixiyay.
Waxaa uu carrabka ku dhuftay in qeybtq xoghaynta ee uu ka tirsanaa madaxii fulinta Mr. Ezra Chiloba ay bixisay in ka badan 100 qandaraas intii u dhexeysay bishii lixaad ee sannadkii 2016-kii ilaa iyo xiligii doorashadii guud ee sannadii hore.
Hadalkan uu Mr. Chebukati shalay ka hor jeediyay guddiga baarlamaanka u qaabilsan xisabaadka ee PAC ayaa imaanaya iyadoo IEBC lagu eedeyay inaysan faahfaahin qaabkii loo adeegsaday in ka badan 9 bilyan oo shilin.
Mr. Chebukati ayaa su’aalo laga weydiinayay tallaabada ay qaadeen saraakiisha sar sare ee IEBC si ay uga hor tagaan lunsashada dhaqaale ee lagu soo bandhigay warbixinta uu soo saaray hanti dhowraha guud ee dalka .Edward Ouko.
Guddoomiyaha IEBC ayaa sheegay inay isku dayeen inay tallaabooyin dhowr ah qaadaan balse ay wada shaqeyn la’aan kala kulmeen madaxii fulinta ee la ceyriyay Mr. Ezra Chiloba.
← Maxkamadda oo maanta go’aan ka gaareysa dacwad ka dhan ah madaxda NHIF
Raila Odinga oo baaq u diray madaxda Afrika →